Degmada Hallsbergs waxeey ku taala Sydnärke, oo waxeey saaran tahay xadka dhul banaan iyo jiq. Degmada oo dhan waxeey lee dahay goob isboorti, dhul uu fiican beer iyo waarig gurasho, buuro-jiq ah iyo xeebo uu soo jideeyso qofka in uu soo boqdo asago wato sanduuqa-cansiyireenta iyo usha-dabeeyska. Jawiga ururada iyo dhaqamada waxeey soo bandhigaayaan wax kasto laga bilaabaa heesta jazz ee heer caalami ah ilaa xalqado waxbarasho oo maadoo kasto, sido kalena tartamo kubada cagta iyo gacanta iyo farshaxan darbi uu sameeyay Carl Larsson.
Degmada Hallsberg waa dagmo balaaran oo Hallsberg ka tahay xaafada ugu weeyn. Xaafadaha kale waa Hjortkvarn, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö iyo Vretstorp. Xaafadahaan si yaryar waxaa ku yaalo dukaamada raashinka, xanaanada caruurta iyo dugsiyada, taajir ayee ka yihiin ururada, waxeeyna lee yihiin bey’ad dabeecad raaxo leh iyo fursada masaafad-raacid oo fiican.
Xafiiska canshuuraha, xafiiska qasnada ceeymiska iyo Hey’adda socdaalka meesha ugu waa Örebro. Xafiiska shaqada waxuu ku yaalaa Hallsberg.
Hoowlo dugsi xanaano iyo guriga xilliga firaaqada waxaa loo hayaa xaruurta uu dhexeeyo 1 sano ilaa inta xilliga guga uu canuga gaaraayo 13 sano. Degmada ee qofka dagan yahay ayaa mas’uul ka ah in caruurta degan Isiwidhan in loo soo bandhigo xanaaneeyn nuucaan ah. Waa in ee ahaata mid farxad galin leh, amaan iyo waxbarasho leh ayadoo loogu tala galay caruurta dhan oo ku jiro hoowlaheena. Caruurta waa ciyaari karaan, sameeyo iyo in la baaro , gooni ah ama koox ahaan ayadoo qof weeyn la caawinaayo. Bogga degama ka akhriso in dheerad oo ku saabsan xanaaneeynta caruurta.
Länstrafiken ayaa ka mas’uul ah gaadiidka dad weeynaha ee gobolka Örebro.
Lärare i matematik till Alléskolan Lärare i gymnasiet
Lärare i svenska till Introduktionsprogrammet / IM IA Alléskolan Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Arbetsledare till Arbetsmarknad - och integrationsenheten Gruppledare för kontorspersonal
Vi söker fler säljare i Hallsberg Utesäljare
Socialsekreterare till barn - och familjeenheten Socialsekreterare
Resurs till Förskolan Elevassistent
Personlig assistent till 8 - årig tjej i Hjortkvarn Personlig assistent
Vårdpersonal för timvikariat Vårdbiträde
Psykolog till vårdcentralerna Hallsberg , Askersund och Kumla Klinisk psykolog
Disktriktssköterska / sjuksköterska Hallsbergs vårdcentral Distriktssköterska
Volvo Production System - coach med fokus på utveckling Produktionskoordinator
Enellys söker Restaurangbiträden Restaurangbiträde
BVC sköterska Hallsbergs vårdcentral Distriktssköterska
Lärare till vård - och omsorgsutbildningen , Allévux Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
El - montör sökes till Åsbro Maskinmontör
Specialpedagog till Alléskolan Specialpedagog
Arbetsledare till Driftområde Hallsberg Arbetsledare, anläggning
Yrkesarbetare till Driftområde Hallsberg Drift- och vägunderhållsarbetare
Säljare Bergmaterial - Hallsberg Utesäljare
Bogga 1 ee ka mid ah 45
Malmö 4 h
Örebro 20 min